Rhinoplasty non-kuhlinzwa: izibuyekezo, izithombe. Non-kuhlinzwa rhinoplasty impumulo
Ngemva kokuhlinzwa plastic isibe inkonzo kalula, futhi izintengo abe eyamukelekayo ngempela, imithetho emzabalazweni ubuhle inkimbinkimbi: perehotelos amakhulu abantu ukuba ngokwabo futhi wazibekela umgomo ukuze ujike umzimba wami ibe esezingeni ubuhle ngosizo nommese udokotela ohlinzayo sika.
Sokuqala senzeka isidingo ukuhlinzwa rhinoplasty. Kodwa uma umuntu engathandi ukuya ngaphansi nommese udokotela ohlinzayo fisa he thembisa phi okunye? kungakhathaliseki rhinoplasty non-kuhlinzwa kungenzeka? Ake sizame sokulungisa le nkinga.
Rhinoplasty non-kuhlinzwa: nenqubo
Ngenhlanhla, elungile zangaphandle acinene ukukhubazeka kungenzeka ngaphandle kokuhlinzwa olukhulu. rhinoplasty non-kuhlinzwa - indlela yangempela ngokuphelele, okuyinto kakade yazuza izinkulungwane zabantu uzama ukuthuthukisa ukubukeka kwabo.
Esikhundleni the nommese we udokotela ohlinzayo wenza umjovo we izinto ezikhethekile ukuthi kungenziwa ngokuphepha uma kuqhathaniswa ne izimila. Fillers yethulwe ubuso ngqo endaweni edinga ukulungiswa, futhi ezandleni abazokwazi udokotela ohlinzayo abakwazi kuphela imibimbi bushelelezi futhi qinisa isikhumba, kodwa futhi ukuze ulungise ukuma kwekhala.
Ngenxa yalokho, umuntu uthola imiphumela ehlala njalo, kodwa, ngeshwa, hhayi eside. Okungukuthi, rhinoplasty non-kuhlinzwa - inqubo kumele kwenziwe njalo, uma ufuna ukujabulela ubuhle babo izici zobuso njalo.
umjovo inqubo ngokwalo akuthathi imizuzu engaphezu kuka-30.
Izinzuzo ukulungiswa non-kuhlinzwa ikhala
Njengoba kushiwo ngenhla, rhinoplasty non-kuhlinzwa kuthatha imizuzu engu-30 kuphela, futhi isikhathi nokuvuselelwa - hhayi ningi than suku.
Non kwekhala ukulungiswa - inqubo esethola, ngokungafani ukusebenza. Uma umphumela onganelisekile, ungakwazi kamuva ubheke omunye uchwepheshe, bese uzama ukufeza imiphumela kuphumelele kakhulu. Uma inqubo akayithandi, awusoze wena umjovo, futhi akukho okubi okuzokwenzeka.
Ngaphezu kwalokho, asikho isidingo wesabe yezinkinga enkulu engenzeka ngemva kokuhlinzwa. Emva umjovo we fillers Ungase futhi zisifake, kodwa esethola, kuyilapho amaphutha njengoba kuhlinzwa nzinyana ukulungisa.
Futhi-ke, intengo asinakubhuntsha ukubajabulisa. Umjovo we fillers izobiza ishibhile kuka deal wangempela.
Asinakusho lutho mayelana nemibi lolu hlobo rhinoplasty.
Okokuqala, rhinoplasty non-kuhlinzwa, ukubuyekezwa zazo ikakhulukazi omuhle, akakwazi ukulungisa ukubukeka zinokukhubazeka okungathi sína. Fillers bayakwazi ukulolonga amaphutha amancane kuphela, kodwa ngokuphelele ukushintsha ukuma kwekhala, awayona ekwaziyo.
Okwesibili, umphumela ngemva umjovo buhlala: i yamathebhu isilinganiso esaqhubeka umumo unikezwa izinyanga 8. Kuphela ezimweni ezingajwayelekile umphumela kungenzeka ukujabulisa inkosi yayo noma senkosikazi yazo iminyaka emithathu.
Okwesithathu, kukhona uhlu ezithile contraindications inqubo. Ukwahluleka okuthobela nanoma mibandela kungaholela edabukisayo.
Izimpawu I-rhinoplasty non-kuhlinzwa
ukukhubazeka Abaningi ezincane uyakwazi ekuqedeni non-kuhlinzwa rhinoplasty - izithombe izinkulungwane zeziguli abaye zabhekana umjovo yimpumelelo, uqinisekise lesi. Okokuqala, ngosizo fillers ungakwazi ukuqeda:
ukukhubazeka ithiphu ekhaleni;
Futhi yakhetha imijovo ngemva rhinoplasty ezisebenza, okuyinto kushabalele. Fillers isinyathelo kuleli cala, kwangigcina elikuvumela ukuba ngandlela-thile ukufihla amaphutha.
Inqubo umjovo wenziwa ngaphansi izinzwa wendawo, ngakho pre-isidingo thola izeluleko kusuka ongudokotela obulala izinzwa. Futhi usadinga aphase izivivinyo ezimbalwa ukuze uqiniseke ukuthi lowo akayena owakhe yesigaba abantu ngokuphelele akakwazi ukunika imijovo.
Uma kukhona indlela ayinangozi ukulungisa ukubukeka kwabo - kungcono rhinoplasty non-kuhlinzwa. Ngaphambi nangemva inqubo umuntu owayesevele injected, Kusafanele ukuqapha impilo yakho ngoba abanye Izimo.
Ngokwesibonelo, nhlobo ukwenza imijovo abanesifo sikashukela kanye nabantu nenkinga ohlelweni endocrine. Ukulahla le ndlela yokulungiswa ekhaleni uyophinde ube hemophilia, izimila ebulalayo, izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba neziyaluyalu ukopha.
Qiniseka ukuthi akuzona iguliswa izinto ezithathwa injected ngaphansi kwesikhumba. Futhi kusengaphambili ukuxoxa nge ematfuba beautician ka kumiswa keloids.
Izimo lesikhashana zihlanganisa ukukhulelwa, lactation, futhi esikhathini. Futhi, rhinoplasty non-kuhlinzwa asikwazi ukwenziwa emva ukugaya ebusweni esikhathini lapho umuntu elashelwa SARS.
Izinhlobo rhinoplasty non-kuhlinzwa
Non-kuhlinzwa rhinoplasty fillers ihlukaniswe izinhlobo eziningana. Ngayinye yalezi zindlela has pluses yayo kanye minuses, kodwa umehluko omkhulu - uhlobo fillers.
Gel fillers kukhona bionedegradiruemymi, okungukuthi, abazi ukuzixazulula isikhathi. Lena plus, ngoba umphumela isicelo inqubo ongama iminyaka engu-5.
Gel ukwakhiwa ngokuvamile asetshenziselwa kufihla kwelunda. Ngesikhathi inqubo, wenza imijovo eziningana kanye ngemuva ekhaleni - futhi kanjalo wenza rhinoplasty non-kuhlinzwa. Izibuyekezo amakhasimende eminingi emihle - iqhubu ngempela kungaba kakhulu bushelelezi.
Ezisetshenziswa kakhulu izidakamizwa ezifana "Artefill", "Artecoll", "Perlane" njll Imiphumela kukhuthaza ngokukhethekile ngemva isicelo "Artefilla". Okokuqala, inkampani artes Medical iminyaka emihlanu nakho kanye ukwambulile ukuthi imithi abangela Ukuwohloka impilo iziguli. Okwesibili, bakwazi ukuthuthukisa formula yamathebhu, futhi manje futhi kubangela ezishukumisayo siqu collagen izicubu wakho.
Ngemuva kokufaka isicelo "Artefilla" umphumela ihlala ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuya eminyakeni emihlanu, okuyinto futhi ejabulisa.
fillers kwama-hormone kunendima evundisayo ukuthi, ngokuhamba kwesikhathi, amakhemikhali ukuxubana ezicutshini futhi ugxile. Lesi sigaba sihlanganisa yonke collagen fillers eyaziwa esekelwe asidi i-hyaluronic, acidosis acid, esekelwe calcium hydroxyapatite. Namanje ntandokazi ngaphezulu kunikezwa izidakamizwa ezifana "Diprospan" futhi "Kenolog".
Non-kuhlinzwa rhinoplasty "diprospanom" ikuvumela ukuba balahle izicubu zomzimba ezithambile ngokweqile. Ngelilodwa nje, "Diprospan" impumulo kwenza made futhi amandla awo ulunika wabuka ecacile. "Diprospanom" Nokho, imijovo kumele kwenziwe ngokucophelela ukuze singathwesi asuse isicubu ngokweqile, kanye hhayi engimbumbile izindawo azilingani, ukuvuvukala njalo njalo.
Lokho umphumela yayijabulela, kudinga izikhathi imijovo. Cosmetologist wethula impahla amasonto kancane kancane phezu 2-3, futhi kuqinisekisa ukuthi basakaza phezu indawo oyifunayo kwekhala, njalo ukulungisa yi.
Ngokuyinhloko amalungiselelo hormone asetshenziselwa yokulungiswa ekhaleni kanye tip ukungadluliseli 'aristocratical "intuthuko. Futhi ngokuyisisekelo lokhu inqubo kuphumelele. Kukhona kuphela eyodwa ethile: ukwelashwa kwama-hormone unganikezi nomphumela owaqhubeka isikhathi eside. Isikhathi esiphezulu ukuthi bungabalwa - izinyanga 9-12.
Non of ekhaleni rhinoplasty futhi amaphiko ayo futhi kungenzeka usebenzisa Aptos kwayo. Le nqubo ikuvumela ukuba ngokoqobo ubambe ngentambo ngokusebenzisa izindawo inkinga kwekhala kanye uyaziveza, enika ukuma ofiselekayo. Aptos izindikimba ekhaleni ukulungiswa ihlala izinsuku ezingu-2-3, futhi phakathi naleso cosmetologist ephumelelisa imiphumela emihle, bese usika amathiphu kwayo kuphela. Ngaphandle kwalokho, asinakuba zibabaza look yabo entsha.
La imiphumela emibi rhinoplasty non-kuhlinzwa
Nakuba lokhu okushiwo ngenhla ukuthi non-koda rhinoplasty - ngempela ayinangozi ukubukeka ukulungiswa indlela, kodwa namanje ngomjovo ngaphansi kwesikhumba wethula into evela ku umzimba, ngezinye izikhathi kubangele izinkinga.
Zonke imiphumela engavela kusuka non-kuhlinzwa ekhaleni rhinoplasty, zihlukaniswe term lamafisha.
yezinkinga esifushane ayazimela ezinsukwini 2-3 futhi asidingi ukwelashwa. Lezi zihlanganisa ububomvu kanye nobuhlungu endaweni indawo umjovo, ukuvuvukala, kanye nokulimala. yezinkinga esifushane cishe bonke abaye babhekana non-kuhlinzwa inqubo rhinoplasty, futhi ukusabela ngempela nkomoni ukuba umjovo we kukhiqizwa.
yezinkinga Okuningi eziyingozi kakhudlwana eside ukuthi nje ezidinga ukuthi kungenelelwe kadokotela. Ngokwesibonelo, kungaba inkinga engathi sína ukuvaleka semithambo ngu ndaba angaphandle ukulungiselela - noma, ngamanye amazwi, embolism. Futhi ngaphansi kwethonya gravity yamathebhu umjovo kungenziwa kwehlisa noma yayiswa kwezinye izindawo ebusweni, okuyinto ungenziwanga umjovo. Singeke thina siqambe komzimba nezinto izidakamizwa iqondiswa kanye nezifo negciwane herpes.
Ukuvuselelwa emva inqubo
Ngaphambi inqubo umjovo umuntu kumele uvakashele hhayi kuphela Cosmetology futhi ukuhlinzwa plastic, okuzokwenza yokubona ukwenaba futhi izindleko umsebenzi, kodwa futhi endocrinology, Udokotela awe-aleji, nezinye odokotela ngubani uqinisekise ukuthi umuntu akanayo contraindications inqubo.
Ukuze rhinoplasty non-kuhlinzwa kudinga izinzwa wendawo. Ingxenye isikhumba, ukusetshenziswa, njalo ziphathwe isinqandakuvunda. Rhinoplasty inqubo ngokwalo kuthatha 30 kuphela - 45 amaminithi.
Ngemva umjovo ezindaweni lapho kuhlangana khona inaliti ifakwe sisetshenziswa ice, esiza ukugwema ukwakheka haematomas. Ukuze ugweme ukuxakeka okwengeziwe, beauticians ngokuvamile ukweluleka umuntu ubhalisele ngosuku olulandelayo ukuze massage ekhethekile esiza yamathebhu ngokulinganayo basakaza ngaphansi kwesikhumba. Kungenzeka ukuthi kuyodingeka sola isikhashana a imbande ekhethekile ukuthi zivikela ukulimala bese uqedela esiteji ukunikeza ekhaleni ukuma ofiselekayo.
Engakapheli amasonto 2-3 kumelwe ukugweme bethamele ilanga, musa ukuya okugeza kanye sauna, kanye uyeke utshwala ngokuphelele.
Izimo zethu zihluke kakhulu inqubo esiphumelelako rhinoplasty non-kuhlinzwa - isithombe ngaphambi nangemva iziguli nabesifazane ezahlukene kanye ubudala uqinisekise lesi. Ngaphandle kokuhlinzwa, ingozi ngiyajabula ukubukeka kwabo kuyehla kube sezingeni eliphansi. Futhi ngisho noma i-yamathebhu akazange sizakhele, zikhubazekile noma kukhona omunye force majeure simo, abantu bazokwazi ukulungisa imiphumela umjovo ezengeziwe njalo. Okungenani, emva kwesikhashana yamathebhu namanje ukuxazulula, kusale noluncane sigameko ezingemnandi abakwazi ishiwo rhinoplasty, udokotela ohlinzayo wenza nommese.
Ngemva kokuhlinzwa nokuvuselelwa iziguli labetibambile izinyanga 3, bese nokucwala amaklayenti ubuhle uqaphele lula rhinoplasty non-kuhlinzwa, ngemva kwalokho emini konke zokuzikhukhumeza, ububomvu, nakubona umphumela.
Ngaphezu kwalokho, izinga fillers babe cishe akukho nomphumela empilweni yomuntu futhi kubuyise ukuma ofiselekayo-Adalberto isikhathi eside, ngakho izindleko inqubo ngeke ngempela ngakho fabulous.
Into kuphela ethile ekhungathekisayo - wukuthi fillers akuzona panacea for zonke izinkinga ezihlobene ukubukeka. Ezinye yokulimala ngesimo ekhaleni fillers wedwa ayikwazi ukulungiswa. Futhi lapha phambi umuntu ngamunye umbuzo obalulekile: kungakhathaliseki ukwamukela wena njengoba yini, noma iya engozini ngokungadingekile, Ukucwiliswa ngommese likadokotela ohlinzayo? Ngemva yimuphi operation - kunjani ilotho: akukho udokotela ayikwazi ukuqinisekisa impumelelo ngokuphelele.
Ilivu yokugula: ukugcwalisa kanjani, amakhodi isifo, elungisa e ilivu yokugula
Nosawoti excretion - inqubo ephulukisa
Namathansela Okungalapheki. ukwelashwa
Ngaphansi kwamanzi eshaweni massage kanjani?
Isakhiwo compounds futhi athwala umoya-mpilo ezinkulu
Okufanele ukwenze uma yenhlwathi umkhaza
Uyini eside phakathi kwezakhi zolimi? amagama phakathi kwezakhi zolimi
UMongameli laseChile Michelle Bachelet: Biography, izici imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Isikhathi sokuhamba phambili! Ukwakhiwa Kwezimiso Zokomoya!
Jess plus: isilawuli lokuzalwa amaphilisi
Nikon D810 Sibutsetelo imodeli, izibuyekezo zamakhasimende nochwepheshe
Izinzuzo kwi-Stock Exchange - imithetho ezosiza ekufezeni impumelelo
Beam usebenzisa Sock. Simple, fast and amahle
Symptomatology kanye nokwelashwa ukuvuvukala neseleko
Yini okusungulile engavamile futhi ezithakazelisayo wasinika ekhulwini lama-21?
Wamadokodo izinja, enziwe ngezandla zakhe - kumane nje zithuthukisa lokusungula futhi yokuzibeka aphethe